-မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ ယနေ့ မေလ (၂) လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တဲ့ ကမ… – PVTV Myanmar
-မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ ယနေ့ မေလ (၂) လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးနေ့မှာ ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကို ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှုတွေ၊ လူအုပ်ထဲကားနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေအပြင် ပြည်သူတွေရဲ့ ပစ္စည်းဉစာတွေ လုယက်ယူငင်တာတွေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိ
-ချင်းပြည်နယ်ကာကွယ်​ရေးအဖွဲ့ CDF ဌာနချုပ်က အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီကို သတိပေးစာတစ်စောင် ထုတ်ပြန်
-နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင် မတရား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူများအားလုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးရန်ကို ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီက နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ထပ်မံ တောင်းဆိုစတဲ့ PVTV ရဲ့ ညနေပိုင်းသတင်းအစီအစဉ်ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Like – 8.5K Share – 1235
UN ကိုပြောလိုက်ပါ တံခါး ဆက်ပိတ်ထားပါလို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဝင်လာမယ်ဆိုမှပဲ ဖွင့်ပြီးထွက်လာပါလို့။ ဒီခွေးတွေ လူစကားနားမလည်တာ ကို ဘာတွေဆွေးနွေးခိုင်းနေရတာလဲ ငါတို့က ခွေးလို ပြောတက်မှမအလ တွေကနားလည်မှာ။
Nora Sai Khwar says:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် UN ရယ် ဘာမှ​​ထိရောက်မှု ဖြစ်မလာပဲ အသက်တွေသာ စတေးနေရတော့လဲ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး တာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတာ သိသွားပါပီ အစည်းအဝေးတွေလဲ ခဏ ခဏ လုပ်မနေပါနဲ့တော့ လူကြီးမင်းတို့ ပင်ပန်းပါတယ် တရုတ် ရုရှား သြဇာကို မကျော်နိုင်သရွေ့ ပြည်သူကလဲ မမျှော်လင့်တော့ပါဘူး ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရော ဖြစ်နေတဲ့ မင်းအောင်လှိုင်ကို ကာကွယ်တာလား ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်မှာလား တောင်မသဲကွဲတာ ကြာပါပီကွယ်
2021-05-02 at 9:50 PM
Deepak Lmkk says:
ပြည်သူ တွေ တစ်ရက် တစ်ရက် ကျဆုံးတဲ သတင်းတွေ မတင်ပါနဲ…စိတ်နာတယ်. ပြည်သူတွေကို လက်နက်တွေ အမြန်ပေးပါ…ပြည်သူကိုယ်တိုင်တိုက်မယ်..
R2p တို un. us တွေ မမျှော်တောဘူး
2021-05-02 at 10:02 PM
ပထမဆုံးလာတဲ့ UNသတင်းကို haha react ကွက်ပေးလို့မရဘူးလား😁😁
2021-05-02 at 10:09 PM
2021-05-02 at 10:14 PM
Kaung Plus Cherry says:
ကုလသမဂ္ဂ ကိုမေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးရှိပါတယ် ယူတို့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကို အပြစ်မရှိပဲဖမ်းထားခံရတဲ့လူတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့ကို နောက်ဆုံးဘယ်နှကြိမ်လောက်ထိတောင်းဆိုသွားမလဲသိချင်တယ် နောက်ဆုံးကြိမ်ထိတောင်းဆိုလို့မရခဲ့ရင်ကော ဘယ်လိုအရေးယူမလဲ အဲ့ဒါလဲသိချင်တယ် တခါလာတောင်းဆို တခါလာတောင်းဆို ဘာမှလဲဖြစ်မလာဘူး
Minnaing Minnaing says:
2021-05-02 at 10:27 PM
ဝင္း လိူင္ says:
Khin Hnin Aye says:
2021-05-02 at 10:32 PM
UNကမသိရှာဘူး စကစတွေနဲ့ဆက်ဆံရတာ လူသေကောင်တွေနဲ့ပြောနေရသလိုပါပဲ
2021-05-02 at 10:41 PM
တစ္ခါလာဒါဘယ္ ႏွစ္လာလည္ဒါဘယ္ ေစာက္ပိုေတြမ်ားျဖစ္ထင္ တယ္ သီးမခံႏိုင္ေတာဘူး
2021-05-02 at 10:47 PM
UN ကို လုံးဝ အယုံကြည်မရှိပါ
စကားပြောသူပြောင်းပေးပါ ခံစားလို့မကောင်းဘူး ပေါ့ပြက်ပြက်နိုင်လွန်းအားကြီးနေလို့ပါ
2021-05-02 at 11:09 PM
Kyawtkyawt Zan says:
UN ရယ်သောက်လြပ်ရှုပ်ခံပီးတော့ တံခါးဖွင့်တွေတံခါးပိတ်တွေလုပ်မနေနဲ့ နင်တို့ဟိုကသူ့ပဲမြစ်ကိုလှန်ပြနေတာ ငါတို့ကလည်းနင်တို့ကိုအါးမကိုးတော့ဘူး ငါတို့ဟာငါတို့ပဲတိုက်တော့မယ် လုပ်လိုက်ရတဲ့အစည်းအဝေး
Ngu Wah Htet says:
2021-05-02 at 11:25 PM
NUG ရေ UN တို့ US တို့ကို မစောင့်နေပါနဲ့တော့။ သူတို့ကိုစောင့်ရင်းနဲ့ ပြည်သူတွေ လုံးပါးပါးတော့မယ်။ လက်နက်သာ ရအောင်ထုတ်ပေးပါတော့။ ကိုယ့်ဘာသာပဲတိုက်မှရမှာပါ
က်ဝ္ အဲ ဟိ says:
2021-05-03 at 12:17 AM
UN ဝင်သင့်တာကြာပြီး တရုတ်နဲ့ရုရှားမပက်သက်တဲ့နည်းလမ်းမရှိဘူးလား မရှိရင်လည်းမလာပါနဲတော့ ကိုယ်ဟာကိုယ်ပဲတိုက်ရတော့မယ် လက်နက်ထောက်ပံ့ပေးပါ
ラィン グワー says:
2021-05-03 at 12:45 AM
Htike Tan Htun says:
2021-05-03 at 3:36 AM
ေတာ္ပါ UN ရာ ကမၻာ့ ရန္ပုံေငြ ကုန္ပါတယ္ က်ဳပ္တို႔ ႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာစာ မွ ထုတ္မေနပါနဲ႔ ေတာ့
2021-05-03 at 7:24 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်UN,နောက်ထက်လဲ ဒီတက်ကောင်းတဲ့ စာများအမိန့်များ ထုတ်ပေးရန်တောင်းဆိုပါတယ်။
2021-05-03 at 7:54 AM
2021-05-03 at 7:56 AM
UN နဲ႔ အာစီယံေပါင္း
Komyat Kothu says:
2021-05-03 at 8:29 AM
အလုပ်မဖြစ်တဲ့အ​ပြောမျိုး​တွေပဲ ခဏ ခဏ ​ပြော​နေကြတယ် ၊
” ငါတို့က​တော့ တာဝန်​ကျေ​ပြောတာပဲ နင်တို့လုပ်ချင်လုပ် မလုပ်ချင်​နေ ဒါပဲ ” ၊ အဲဒါမျိုးဖြစ်​နေပါတယ် ။
Kar Yan Zaid says:
2021-05-03 at 10:26 AM
2021-05-03 at 12:49 PM
ပြည်သူလက်ထဲ လက်နက်အချိန်မီရောက်ဖို့ကြိုးစားပေးပါ အချိန်ကရွှေထက်တန်ဖိုးကြီးပါတယ် ဒါပြည်သူတယောက်ရဲ့တောင်းဆိုမူ့ပါ
Ko Thar Thar says:
CRPH. NUG. မယောင်ပါနဲ့ပြည်သူ့မျက်နာကြည့်ပါ
ဘာမှမလိုဘူး ခုထိအောင်မြင်နေတယ် ပွဲအမြန်သိမ်းနိုင်အောင်လို့
2021-05-03 at 6:27 PM
ကိုယူေဒး ယူ ေဒး says:
2021-05-03 at 9:30 PM
UN mean is United Nothing. 👍🤣🤣👍